Isina kufanira COVID yekuchengetedza tsvina inogona kuwedzera hutachiona kupararira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Isina kufanira COVID yekuchengetedza tsvina inogona kuwedzera hutachiona kupararira
Health News • nhau • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
COVID marara manejimendi
MuNational Center yeBiotechnology Ruzivo (NCBI) kudzidza kwakaitwa muUS pane Kukanganiswa kweCVV-19 denda rekuchengetedza marara.
Iyo COVID-19 denda inonzi yakadzora kusvibiswa kwemhepo uye ruzha rwakanangana nezvakatipoteredza uye nekuvandudza zvipenyu zvakasiyana uye nzvimbo dzevashanyi.
Asi kukanganisa kwekugara-pamba uye matanho ekudzivirira pakushandisa marara anotyisa.
Kukundikana kunyatsogadzirisa marara akagadzirwa kubva kunzvimbo dzehutano uye dzimba zvinogona kuwedzera kupararira kwe COVID-19.
Nekuda kwekuunganidzwa kwemagurovhosi, mahembe, mamask, uye zvimwe zvipfeko zvekudzivirira nemidziyo, zvinoita kunge kune dambudziko remarara nekuda kwekugadzirwa kusingaite kwemarara kubva kumhuri dzese nenzvimbo dzehutano. Kukundikana kunyatsogadzirisa marara akagadzirwa kubva kunzvimbo dzehutano uye dzimba zvinogona kuwedzera kupararira kwe COVID-19 kuburikidza nechipiri kutapurirana.
Kuraswa kwakapararira, kupisa kwakashama, uye kupisa kunogona kukanganisa mhando yemweya uye mhedzisiro yehutano nekuda kwekuratidzwa kune chepfu. Nekudaro, kune dambudziko rekugadzirisa marara asina kujairika nekushandisa marara aripo uchidzikisa kusvibiswa kwemhepo, kudzivirira kutapuriranwa kwehutachiona hwechipiri, uye kudzikisira njodzi inogona kuvepo pahutano.
Hazmat marara akapatsanurwa kuita mabhegi matsvuku kuti ave nyore kuzivikanwa uye nekuchenjerera kurasa muPattaya.
Pattaya achinyura mumurwi wengozi COVID-19 marara
Ndiine vangangoita zviuru makumi maviri nevaviri Pattaya vagari vari muchipatara kana mudzimba vega, dambudziko rine njodzi remuguta iri kukura nekukurumidza kupfuura kesi dzekoronavirus.
Mutevedzeri Meya Manote Nongyai akataura kuti anopfuura matani manomwe pazuva emasikisi, magiya ekudzivirira, nyama, uye marara emunyika anoshandiswa nevarwere ave kuwanda. Izvo zvinofananidzwa nemakirogiramu mazana masere ehazmat marara pamberi pekoronavirus yechitatu wave ichiputika muChonburi.
Pane zvikonzero zviviri zvakakurisa zvekuunganidzwa. Chekutanga huwandu hwevanhu ikozvino vari pasi peimwe nzira yekurapwa kana kupatsanurwa: 2 muChonburi yese kubva Chitatu. Dunhu iri rakamhan'ara nyaya 18,942 nyowani, kusanganisira 974 mudunhu reBanglamung, idzo inosanganisira Pattaya.
Chikonzero chechipiri chiyero chinoshingairira chakashandiswa nehurumende kupatsanura chimwe chinhu se "hazmat." Chaizvoizvo, chero chinhu chakabatwa nemunhu akayedza akavaka COVID-19 - kunyangwe ane chiratidzo kana kwete - anodikanwa kuti agadzikwe mupurasitiki tsvuku uye kunyatsobatwa nekurasa. Izvi zvinosanganisira zvinhu zvakasarudzika senge bhodhoro remuto unopisa kana chidimbu chepepa.
Mutengo wekurasa iwo mabhegi matsvuku wakakura. Anotakura marara aPattaya, Eastern Green World Co, anobhadharisa 1.5 baht pakirogiramu pamarara akajairwa. Inotapukira marara, zvakadaro, inodhura 24 bah kilogiramu kuti ibvise.
Izvi zvakatungamira kune "vaenzi" - mahotera akashandurwa ari kutarisira varwere vane hutachiona husina kutsarukana - kuviga marara avo kudhadha achibhadhara fizi. Iyo Cholchan Pattaya Beach Resort yakabatwa kutanga kwemwedzi uno ichimonera mabhegi ayo matsvuku ehazmat muhomwe nhema nhema marara.
Manote akati Pattaya akaburitsa kunze kwekuunganidza kwayo hazmat pachinzvimbo chekushandisa Eastern Green World, asi iyo femu isina kutaurwa zita haina kukwanisa kufambirana nemafungu emabhegi matsvuku. Saka veEastern Green World vashandi vakadzidziswa maitiro ekugadzirisa marara ane ngozi kuitira kuti vagone kutakura marona ecoronavirus, zvakare.
Manote akati zvakakosha kuti mabhegi ese ehazmat aunganidzwe mukati mevhiki rimwe chete, saka zvinotora inopfuura imwe kambani kuzviita.
Mutevedzeri Meya akasimbisawo kuti veruzhinji vanofanirwa kungwarira pakurongedza marara kuitira kuti chero munhu ari oga kana kuti ave oga pamba ashandise mabhegi matsvuku.